Wasiir Sadiiq Warfaa oo la kulmay RW Qatar – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasiir Sadiiq Warfaa oo la kulmay RW Qatar
Ra’iisul wasaaraha Dalka Qatar, ahna wasiirka arrimaha gudaha, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ayaa Xafiiskiisa Doxa ku qaabbilay Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliya, Sadiiq Xirsi Warfaa oo booqasho rasmi ah ku jooga Dalkaasi.
Ra’iisul wasaare Abdullah bin Nasser iyo Wasiir Sadiiq Warfaa ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka iyo xoojinta iskaashiga Labada Dal, wuxuuna Ra’iisul wasaaraha Qatar boggaadiyay dedaallada ay Dowladda Soomaaliya ugu jirto dib u dhiska Dalka iyo horumarinta Bulshada.
Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii ay Dowladda Qatar u ballaarin lahayd kootada Soomaaliya ee shaqaalaha ay dibedda ka keensato Dowladda Qatar, si fursado loogu helo muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Waxaana sidoo kale laga hadlay dib u howlgalinta Machadka horumarinaya iyo maareynta Soomaaliya ee SIDAM, dib u anba qaadidda heshiis ay labada Dal galeen Sanadkii 1983-dii oo la xiriiray iskaashi shaqo wadaag iyo horumarinta Bulshada.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Sadiiq Warfaa ayaa Dowladda Qatar uga mahadceliyay taageerada ay siiso Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaaraha Qatar ahna wasiirka Arrimaha Gudaha, Mudane Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ayaa dhankiisa sheegay in ay Dowladda Qatar ka go’antay taageerada Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Mudane Sadiiq Warfaa ayaa muddada uu ku suganyahay Dalka Qatar wuxuu kulamo la qaadan doonaa madaxda sare ee Dowladda Qatar.
Previous articleQarax bambaano ayaa lala beegsaday bas booliis koonfurta dalka Turkiga
Next articleDEG DEG:-Qarax Lala Eegtay Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada
Shirkada Genel Energy oo bartilmaameedsaneysa in 2 Bilyan oo Barmiil...